पहिलो डेटिङमा यी ५ डर किन ? - VOICE OF NEPAL
पहिलो डेटिङमा यी ५ डर किन ?
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २१:४८
डेटिङ भनेको तपाईंको लागि उत्तम पार्टनर खोज्ने माध्यम हो। तर त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन्, जो डेटिङमा जान डराउँछन्। कारण रु मानव प्रकृति अनुसार दिमागमा डर उत्पन्न हुन्छन् । ती पनि सबै गलत धारणाका कारण उत्पन्न भएका भयहरू हुन् । जोसँगको डेटिङको डरले तपाईंको दिमागमा प्रभुत्व जमाउँछ भने यो तपाईं‌मा उत्पन्न हुने अनावश्यक भय मात्रै हुन् । यहाँ हामी डेटिङको सबैभन्दा सामान्य भयको बारेमा कुरा गर्दैछौं । साथै, कसरी तपाईं त्यस डरलाई पन्छाउन सक्नुहुन्छ, हामी पनि यसको बारेमा छलफल गर्नेछौं। ताकि सही पार्टनरको लागि तपाईंको खोजीको यो मार्ग तपाईंको लागि पूर्ण रूपमा खुलोस् । जब त्यहाँ अधिक अवसरहरू हुन्छन्, सहि पार्टनर छनौट गर्न सजिलो हुन्छ।
पहिलो डर : भेटको क्रममा के कुरा गर्ने ?
कुनै यस्तो व्यक्ति जसको बारेमा हामी केही पनि जान्दैनौं । कुनै पनि अपरिचित व्यक्तिसँग बाहिर जान असहज महसुस हुनु आफैँमा स्वाभाविक कुरा हो । यस अप्ठ्यारोका कारण धेरै मानिसहरू डेटिङ जान चाहँदैनन् । तर सोच्नुहोस् त जुन प्रश्न तपाईंको दिमागमा चल्दै छ, यो अर्कोको दिमागमा पनि भएको नहोला र रु यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईंको साथी पनि त उति नै डराएको हुन सक्छ नि होइन र रु गणितमा हामीले पढ्यौं कि ुमाइनस र माइनस प्लस हुन्छु । त्यही सूत्र यहाँ पनि लागू गर्नुहोस्, । त्यसैले चिन्ता छोड्नुहोस् र डेटिङको लागि हुन्छ भन्नुहोस् ।
दोस्रो डर : अस्वीकृत हुने डर
यो डर मानव प्रकृतिको लागि पनि उपयुक्त कुरा हो । हामी सबै चाहन्छौं कि मानिसहरूले हामीलाई मन पराओस्। डेटिङका क्रममा पनि प्रत्येक केटा वा केटीले आफू अघि नै मान्छेलाई मनपराइरहेको हुन्छ ।
कसैलाई भेट्नुभन्दा पहिले हामी सोच्न थाल्छौं कि यदि उसले हामीलाई मन पराएन भने के हुन्छ रु तर यस प्रश्नको व्यावहारिक हिसाबले सोच्नुहोस् । तपाईं जस्तो सुकै भए पनि तपाईंलाई जुनसुकै बेलामा पनि अस्वीकार गर्ने सम्भावना ५०÷५० प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा तपाईं अस्वीकारसँग किन डराउनु हुन्छ रु
तेस्रो डर : सबै कुरा राम्रो हुन्छ कि भन्ने
हामी मानिसहरुको सबभन्दा राम्रो र खराब गुण भनेको नै हाम्रो कल्पना शक्ति हो। अहिले तपाईं अस्वीकृत हुने सोचेर डराउनुभएको हुन सक्छ । तर दोस्रो क्षणमा यो त्रासले पनि सताउन सक्छ कि यदि सबै ठीकठाक भयो भने त्यो अवस्थामा के होला रु पहिलो डेटमा नै हामीले अर्कोलाई कसरी चिन्न सकौंला र रु भन्ने चिन्ता पनि हामीमा हुन्छ । पहिले मनपराउनुको मतलब यो हो कि तपाईं अर्को डेटिङमा व्यक्तिको साथमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछिका डेटिङहरूमा सबै कुरा ठीक हुन्छ । त्यसैले पहिलो डेटिङमा नै सबै मान्छे भावुक हुनु हुँदैन ।
चौथो डर : प्रतिबद्धताको डर
यो डर तेस्रो डरको एक विस्तार हो। यस किसिमको डर सामान्यतया पुरुषहरूमा भन्दा महिलामा बढी देखिन्छ। महिलाहरूलाई लाग्छ कि डेटिङको अर्को चरणमा प्रतिबद्ध सम्बन्धको सुधार हुनुपर्छ। त्यसो त्यस्तो नहुने भयो भने महिलाहरू दोस्रो डेटिङबाट टाढा भाग्ने गर्छन् । हेर्नुहोस्, कसैसँग डेटिङ गर्नुको मतलब यो होइन कि तपाईं भोलि उसैसँग बिहे गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंले आफैंलाई र उसलाई पनि समय दिनैपर्छ । प्रतिबद्ध सम्बन्धको थालनी गर्नुअघि हामीले हाम्रा अपेक्षाहरू र भविष्यका योजनाहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यदि सबै कुरा ठीक देखिन्छ भने प्रतिबद्धतादेखि किन डराउनुपर्ने रु
पाँचौं डर : सही व्यक्ति नपाएकोमा डर
यस्तो डर लिएर बाँच्ने तपाईं एक्लो मान्छे भने होइन । हामीहरू धेरैमा यो डर महसुस हुने गर्छ । अझै नराम्रो कुरा, यो हुन सक्छ कि हामीले डेट गर्दै गरेका व्यक्ति सही छ वा खराब छ रु कहिलेकाहीँ त के पनि हुन्छ भने धेरै पटक तपाईं डेटिङमा गए पनि तपाईंले अर्को साथीलाई चिन्न सक्नुहुन्न । यो डरको अर्को रूप हो ( प्रत्येकचोटि जब तपाईं फरक व्यक्तिसँग डेटिङमा जानुहुन्छ भने त झनै तपाईंले उसलाई चिन्न सक्नुहुन्न । जसको कारणले तपाईं‌ डेटको अवधारणाबाट डराउन शुरू गर्नुभयो। हेर्नुहोस् यो जेन्युइन डर हो, तर जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि, तपाईंले यसलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई मनपराउन जबरजस्ती नगर्नुहोस्। कुनै पनि कुरालाई मनपराउन समय लाग्न सक्छ । राम्रो चीज प्राप्त गर्नका लागि केही समय लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अलिबाबाका चेयरम्यान ‘ज्याक मा’का सफलताका सूत्र यस्ता छन् !
स्मार्ट फोनले बालबालिकालाई यसकारण बन्न दिँदैन स्मार्ट !
भबिष्य बदल्न चाहनुहुन्छ ? यी राम्रा बानी अनुशरण गर्ने प्रयास गर्नुस् !
५० बर्ष नाघेपछि हरेक मानिसले खानैपर्ने यी ६ चिजहरु, यसका फाइदाबारे यसो भन्छन् विज्ञ !
सिस्नोमा के छ त्यस्तो औषधीय गुण, कसरी खाने सिस्नो ?
कुन उमेरका मानिस कति घण्टा सुत्ने ? घटी वा बढी सुते गम्भिर असर पर्नसक्ने !
मोबाइल र सामाजिक सञ्जालको लत कसरि छुटाउने ?